Momba anay - Shang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
TKFLO-marika kalitaon'ny mpanamboatra paompy
16 taona traikefa amin'ny fanohanana ny tetikasa fanondranana sy iraisam-pirenena
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. dia orinasa manana teknolojia avo lenta izay mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana vokatra fanaterana tsiranoka ary angovo azo avy amin'ny angovo, ary mandritra izany fotoana izany dia mpamatsy vahaolana fitsitsiana angovo ho an'ny orinasa. Miara-miasa amin'i Shanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd, Tongke dia manana ekipa teknika za-draharaha.
Miaraka amin'ny fahaizana ara-teknika matanjaka toy izany, Tongke dia manohy manohy fanavaozana ary manangana ivon-toeram-pikarohana roa momba ny "fanaterana tsiranoka mandaitra" sy "fifehezana hetra manokana amin'ny motera manokana" Amin'izao fotoana izao Tongke dia nahomby tamina zava-bita an-trano marobe niaraka tamin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina, toa ny "SPH series tena mahomby" priming pump "ary ny rafitra rafitra paompy mitsitsy angovo mahery vaika".
Nandritra izany fotoana izany Tongke dia nanatsara ny teknolojia paompy nentin-drazana folo mahery toy ny turbine mitsangana, paompy rendrika, paompy mitsivalana ary paompy centrifugal multistage, manatsara be ny haavon'ny teknolojia amin'ny tsipika nentim-paharazana.
Ny atrikasa dia mampihatra ny rafitra fitantanana 6S, SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE, SECURITY. Ary araky ny GB / T19001: rafitra fitantanana kalitao momba ny kalitao 2008, nanangana rafitra fitantanana kalitao ny orinasa, tokony ekena ary ny fampiharana ny fihazakazahana. Samy fiantohana kalitao ivelany ny rakitra "manual" kalitao, fa koa ny rafitra fitantanana kalitao anatiny ao amin'ny orinasa hametrahana sy hampiharana ny masonkarena fototra amin'ny hazakazaka, ny mpiasa rehetra dia tokony hampihatra izany amin'ny fomba tsara.
Miray hina isika ary mampiseho ny fanahin'ny fizarana
Manangana fiaraha-miasa matanjaka izahay amin'ny fanaovana ny marina, ny fisokafana ary ny fahatokisana
Niara-niasa izahay mba hahatratrarana tanjona iraisana
Mankasitraka sy manaja ny fandraisan'anjaran'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa izahay
Mpiara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay hatramin'ny fifandraisana voalohany ka hatramin'ny serivisy aorian'ny fivarotana. Amin'ny maha mpanolotsaina teknika anay dia mifanakalo hevitra momba ny zavatra takiana amin'ny mpanjifanay izahay ary mamolavola vahaolana izay mampitombo ny fahombiazana sy sanda fanampiny. Mandritra ny rojo fizahana voamarina ISO 9001 - manolotra fonosana vahaolana manintona indrindra izahay.
MISY MPIANATRA ANTSIKA
FANOMPOANA ny mpanjifa
TONGKE FLOW dia nahazo taratasy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny WK FIRE ENGINEER tamin'ny 18 feb 2019. Ny voalohany toy izao manaraka izao:
Misaotra ny injenieran'i TONGKE tamin'ny fitarihany, nametraka tamim-pahombiazana 3 setin'ny paompin-dranomasina 400VTP tao amin'ny seranam-piaramanidina izahay ary ankehitriny dia mandeha tsara sy milamina ireo paompy. MISAOTRA
Misaotra anao nandray tsara anao, nahafinaritra anay ny fotoana tao Shanghai. Ary misaotra an'Andriamatoa Seth sy ny ekipa matihanina amin'ny ekipa injenieranao. Hanao ny fanitsiana araky ny soso-kevitrao izahay ary hanao fanamafisana farany rehefa miverina izahay.